Yini impahla eluhlaza yokugcwala phansi kwe-spc? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Yini impahla eluhlaza yokugcwala phansi kwe-spc?
Hlela: UDenny　2019-12-06　Iselula
Iphansi le-SPC lakhiwa kakhulu i-calcium powder ne-polyvinyl chloride stabilizer engxenyeni ethile yokwenza izinto ezihlanganayo zephansi. Ingabe into entsha, ephansi ye-SPC engaphakathi. Iphansi le-SPC lisebenzisa i-calcium powder njengezinto eziyisihluthulelo esiyinhloko. Ngemuva kokufaka ipulasitiki nokusabalalisa isendlalelo, ungqimba olunethiwekhi yokuhlobisa ifilimu eshisa izikhawu ezine kanye nokugobeka okungahambisani nakho akunazinto ezinobungozi njenge-formaldehyde nezinsimbi ezisindayo. Kuyindawo evikela imvelo evikelekile engu-100%. 0 floordehyde flooring.
Ukukhiqizwa kwesikhala sokukhiya kwe-SPC kuhlukaniswe izinhlobo ezintathu zezinto zokwenziwa ezingasebenzi: izinto ezintsha, izinto ezindala ezixubekile, izinto ezenziwe kabusha.
Yini impahla eluhlaza yokugcwala phansi kwe-spc? Okuqukethwe okuhlobene